Qalab la heli karo oo kooban oo ku jira ProZ.com
Qaansheeg ay leeyihiin turjumaanada
Si fudud u samee, u dir oo raadraac qaansheegta ProZ.com ku jira.
Kooxda iibsashada turjumaanka (TGB)
TGB waa qalab loo bixiyo inuu ku siiyo fursada ay leeyihiin turjumaanada iibsanayo qalabka CAT iyo softwarada kale wadajira si ay u helaan qiimo jaban oo ayna garowsadaan muhiimada kaydsiga iyadoo loo marayo iibsashada kooxda.
Kooxda iibsashada turjumaanka
Qalabkan waxa uu xisaabaa iskucelceliska sicirka waa inaad ku dalacdaa si aad uga gungaadho dakhliga aad u baahan tahay, oo ay ku saleysan malada aad gelisay. Ogsoonow suuq kasta oo la siiyey ama meelaha takhasuska, sicirka sii socda waa uu sii sarreyn karaa.
Daawo macluumaadka sicirka wadarta ProZ.com, ama isku dhufo sicirkaaga.
Daawo sicirka bulshada
Halbeeg cabbir bedele
Bedel halbeegyada cabbir ee heerkulka (Selsiyas iyo Faarenhaayt), fogaanta (taako, mitir, iwm), iyo wax badan.